Crowdsource Yako B2B Dhata Kuchenesa | Martech Zone
Crowdsource Yako B2B Dhata Kuchenesa
Wednesday, April 6, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakava nekukurukurirana kukuru nevanhu vari pa NetProspex, Software seSevhisi zvishandiso izvo zvinokutendera iwe kuti uwedzere uye uverenge bhizinesi rako kumabhizinesi ekutaurirana marekodhi. Iyo sisitimu yakapfuma, yatove kuunganidza dhata pamusoro peanopfuura mamirioni makumi maviri nemasere ekutaurirana eB21B.
Dzimwe nguva zviri nyore kutora zita, email kero kana chimwe chikamu cheruzivo rwepati. Zvisinei, vanhu vanofambisa mabasa makore mashoma mashoma paavhareji, saka B2B dhatabhesi dzinowanzo kuve dzakamira. Kutumira tsamba dzakafa dzakafa kunogona kukanganisa maitiro ako eemail uye kunyange kukutadzisa. Pamusoro pezvo, hazvibatsire yako yekutengesa timu kana ako anotungamira auya aine chikamu data.
NetProspex yakanyatsobatana neCRM yako uye iri kukurumidza kupa iyo API kuitira kuti masisitimu ekunze agone kuchenesa nekusimudzira dhata ravo zvoga. Sekuwedzera kukurudzira, kana iwe uchiisa zvinyorwa zvitsva kuNetProspex, unopihwa kiredhiti… sezvo uchingova chikamu chechaunga chiri kuongorora data! Iyo ingenius nzira yeese ari maviri anokwezva makambani matsva kujoina sevhisi uye nekuchengeta mitengo pasi kune avo vatengi!
Heano mashandiro eNetprospex:
Vashandisi vanowedzera vanyowani kuNetProspex dhatabhesi mukutsinhana nevatsva vekutaurirana. Ruzivo rwekushandisa tekinoroji hunoshandiswa kuona kuti data revanhu-rakasungwa rakagadziriswa uye kuti iro dhatabhesi rinochengetwa nekufamba kwenguva.
NetProspex's web-based search tool inopa kuoneka kukuru kune chaiko vateereri vateereri, uye inobvumira vashandisi kuisa zvikamu zvetarisiro nekutarisa zvirevo zvinosanganisira basa rebasa, indasitiri, saizi yekambani, nzvimbo yenzvimbo, yakatarwa kambani, zita, kuendesa tekinoroji, nezvimwe.
Yekupedzisira rekodhi inopihwa neruzivo rwekuonana, ruzivo rwemagariro, uye zuva uye zvibodzwa zvinoratidza iko kunyatso uye nenguva iyo rekodhi yakasimbiswa.
Iyo sisitimu inodhura kwazvo (ine mhando vimbiso) inotangira pamadhora 0.75 pachinyorwa. Mutengo wakadzikiswa zvakanyanya kana iwe ukatenga kodhi yekukodha pamberi penguva… nzira yese kusvika pamasendi gumi nemasere rekodhi yemamiriyoni gumi emarekodhi. Kune chero munhu akatenga masevhisi ekuchenesa dhata munguva yakapfuura… uyu mutengo chaiwo. Usakanganwa iwe unowana chikwereti kune ako uploads zvakare!
Iwe unogona zvakare kushandisa NetProspex's kutsvaga kugona:
Kune avo venyu vanofunga kuti sisitimu yakaita seiyi ingave yakaipa zvakanyanya: Kana rekodhi ichitengeswa kuNetProspex, iye wekutaurirana anoziviswa uye anopiwa mukana wekusarudza-kubuda, uye kubvisa ruzivo rwavo kubva kuNetProspex dhatabhesiNdiro danho rinokwira kubva kune mamwe masisitimu ari kuunganidza nekutengesa data rako zvisina basa! Uye zvakare, NetProspex inoda kuti vatengi vayo vateedzere CAN-SPAM vasati vashandisa marekodhi eemail.
Google Analytics: Tevedza Akawanda Akaundi (Nyowani Kodhi)
Chii Chakaipa neChina?
Gumiguru 6, 2011 na2: 35 PM
Saka Doug, ichi chiziviso? Nekuti iwe wanyora akati wandei manyepo akajeka muchinyorwa chino chinoratidzika kunge chisiri chinhu kunze kwekukudzwa kushambadzira kuiswa. Chikamu chekutendeseka huchokwadi hweemail… ehe, hachisi chokwadi, nekuti email kero yangu iri pane yavo runyorwa. Kana mumwe munhu aindisheedza achiti "Hei, une basa here kana tikatengesa email yako kero kune vamwe vanhu?" Fungidzira kuti mhinduro yacho ingave ipi?
Yangu email kero yakagara pane ino dhatabhesi uye ndanga ndiri kuburikidza negehena kuyedza kuti ibviswe. Ini ndinoda yako shoma yekutaura nezve iyo "sarudza kubuda" mutemo uko vanhu vakasarudzika vane rupo vachadaidza uye vobvunza "Mr. mutengi, isu takatenga email yako kero kubva kune mumwe mutengesi anouraya uyo akafunga kuti anga asiri kufara kungoita purofiti kubva mukutengesa kwako, saka akakutengesa, saka unofunga here kana tikatengesa ruzivo rwako kune vamwe vanhu? ”Nekuti ndine chokwadi chekuti 21 mamirioni vanhu vari kuzobvuma kupurwa nevasina kuziva. Zvinotaridza kunge zvakasarudzika, haufunge? Zvakanaka kuziva ndezvekuti ini ndakonzera kuti vamwe vevatengi vavo vawedzere kushatiswa neNetProspex, saka ini ndinogona kungotarisira kuti vacharasikirwa nerimwe bhizinesi nekuda kwematambudziko angu.
Heino mutsara wepasi Doug; iwe HAUYE EMAIL VAKANGANANI nezviziviso zvekutenga zvisina kujairika crap. Iwe hautotumire tsamba vausingazive kuti vatenge yakakodzera crap. Iri izano rakakundikana iro risingabate chinhu asi kukuita iwe wakasarudzika kubva kumaseva uye kukonzera yako yakavhurika uye tinya mareti kuwira sedombo retsumo. Vatengi vaunogona kuchengetedza kuburikidza neemail email, kufona uye fakisi ndiyo yakaderera dhinomineta kana zvasvika pakubatsirwa. Kana chinangwa chako chiri chekubiridzira vanhu, rova ​​zvine simba uye nekukurumidza uye zvobva zvanyangarika mukati mehusiku, saka ichi chingave chirongwa chako! Kana chinangwa chako chiri chekuvaka kuvimbika kwevatengi uye kudzidzisa kuvimba, chirongwa ichi chichava mbambo mubhokisi rako. Vakavimbika (vakangwara) vatengi havatenge kubva kune spammers.
Gumiguru 10, 2011 na4: 20 PM
Wati iwe kana iwe hauna kutaura kuti: "Kana rekodhi ichitengeswa kuNetProspex, iye wekutaurirana anoziviswa uye opihwa mukana wekusarudza kubuda, obvisa ruzivo rwavo mudura reNetProspex."
Iye zvino handina chokwadi kuti chii chaunofunga kuti kunyepa, asi kana iwe ukataura chimwe chinhu chisiri chechokwadi, ndinoshamiswa kuti izvi zvingave sei chiri chokwadi chiri kure. NetProspex haina kumbobvira yandibata kuti "ndibvunze mvumo yangu."
Kana iri yekushandisa email zvine mutoro, rega ndikutaurire chinhu kana zviviri nezve mutoro. Kufunga kuti mumwe munhu haana hanya neemail kero "haina hanya." Kufungidzira kwekanguva kuti mumwe munhu anonyatsoziva mutemo we spam uye maitiro e spam haatore matanho ekuzvidzivirira nekero yavo yeemail… izvo "hazvina basa." Basa rangu rinopera kana masangano akashata achishandisa email kero yangu kuita purofiti pavakati havadaro. Basa rangu rinopera apo makambani anobhadhara mabloggi kuti anyore zvinyorwa zvakanaka nezve masevhisi avo kuitira kuti vataure kuti ivo "vakasiyana." Asi ndine chokwadi chekuti hauna kubhadharwa wongororo dzako, nekuti tese tinoziva kuti mabloggi anofarira kushandisa yavo mari vachifamba kuenda kumakambani akasarudzika kuitira kuti vagone kunyora kupenya kwakapenya nezvechigadzirwa chavo. Muchokwadi, chidimbu chidiki chezvinyorwa zvako pane ino saiti zvinoratidza kuti iwe unoratidzika kunge urikutengesa zvinhu zvakawanda zvekambani pasi pekufungidzira kwe "zvinyorwa." Zvinoita sekunge isu hatigone kuvimba nemunhu mazuva ano, kunyangwe yekupedzisira bastion yemahara kufunga.
Gumiguru 10, 2011 na5: 25 PM
Ngatitangei nekuenderera mberi kwezita kudana. Kunyepa "kutaura kwenhema kunoitwa nechinangwa chekunyengera". Ini ndinopa yemahara yeruzivo blog kune avo vanofarira kupa nhau uye ruzivo nezve zvigadzirwa zvinobatsira kushambadzira kwekambani kuedza. Basa rangu rinopihwa mubairo sei kana ndikangonyepa? Ndingadai ndiine vaverengi vangani? Sei ndaizoisa mukurumbira wangu uye bhizinesi rangu panjodzi zvakadaro?
Ndokumbirawo kuti muverenge mutemo weNetprospex:
"Vashandisi vanogona kusarudza kubuda mukutumirwa neemail kubva kuNetProspex uye mirayiro yakajeka yekubuda mairi inosanganisirwa mumameseji e-mail kana kungotifonera panhamba 1-888-826-4877."
Yangu blog post yakataura zvakafanana maitiro avakanditsanangurira mukuratidzira kwavo. Kana iwe uchinetswa neiyo "yakaipa" bhizinesi iyo yakagovana yako email kana isina-kuishandisa, tora iyo navo! Ini ndakanyatsoda iwe! Kana vakaita zvauri kutaura, ini handizvitenderi nenzira ipi zvayo. Kana iwe uchifunga kuti vatyora mutemo wavo webasa, vamhan'arire. Kana vakatyora mitemo yeSAMP, vaudze. Handikwanise kukubatsira. Ini handishandire ivo. Ini handina kuwedzera yako email kero kwavari. Handina kutumira email kwauri.
Kana iwe uchitenda kuti ndiri kutyora mirawo yeCCC uye ndiri kutobhadharwa mari yezvinyorwa uye ndisingazvizarure, enda undiudze! Ndinogona kukuvimbisa kuti mabhuku angu akarongeka. Ndine vateereri vazhinji vanokoshesa basa rangu uye iyo blog inoramba ichiita zvakanaka. Handidi rutsigiro rwako. Tora kutsika kwako kusiririsa kune imwe nzvimbo.
Gumiguru 14, 2011 na1: 43 PM
"Kana rekodhi ichitengeswa kuNetProspex, runhare runoziviswa uye rwunopihwa mukana wekubuda, uye kubvisa ruzivo rwavo mudura reNetProspex."
Iwe unoramba uchidzivirira izvi uye ndoda kukubvunza iwe imwezve nguva, yechinyorwa, ichi kana ichi hachisi chiito chavo? Wakamboedza here kuongorora izvi kana kuti uri kungotora izwi ravo kuti zviitwe? Sezvandambotaura kare, yako blog inoverengwa senge kushambadzira, uye kana iwe ukatumira zvisirizvo zviratidzo zvekambani, pamwe nemitemo isina chokwadi yekuteverwa, ini ndinosara ndichizvibvunza kuti sei iwe uchizotaura pane chimwe chinhu usingasimbise zvirevo zvechokwadi? Zvingafanana nekubvunzurudza munhu anofungidzirwa kuponda uye kumubvunza kana akapara mhosva, tobva tamhan'ara mhinduro yake sekutsvaga kwechokwadi. Pachinhu chidiki pane iwe une mhosva yeasina kushevedzera venhau. Iwe unosheedza izvi trolling; Ini ndinodaidza izvi kugadzirisa (uye ndiri kuve akanaka pano) mis-chokwadi.
Uye kana ndiri troll, uri kutyora mutemo wekutanga. Usape chikafu troll.